क्रिकेट प्रतियोगितामा सहभागि नेपाली क्रिकेट टोलीको आज मलेसियामातर्फ प्रस्थान - Arthatantra.com
क्रिकेट प्रतियोगितामा सहभागि नेपाली क्रिकेट टोलीको आज मलेसियामातर्फ प्रस्थान
काठमाडौँ । मलेसियामा हुने एसिसी १९ वर्षमुनि यु–१९ (पूर्वी क्षेत्र) क्रिकेट प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउनका लागि नेपाली युवा क्रिकेट टोली आज त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको छ ।
यही भदौ २५ गतेदेखि हुने उक्त प्रतियोगितामा सहभागी टोलीलाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ । नेपाल भने समूह ‘ए’ मा परेको छ । नेपालको समूहमा भुटान, सिंगापुर र थाइल्याण्ड छन् भने समूह ‘बी’ मा आयोजक मलेसिया, हङकङ, चीन र म्यानमार छन् ।
टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा विनोद दास छन् भने सहायक प्रशिक्षकमा कलाम अली छन् । रासस
प्रकाशित मितिः २०७४ भाद्र २३
वि.सं.२०७४ भदौ २३ शुक्रवार १४:५२ मा प्रकाशित
News Views: 41
अघिल्लाे मोटरसाइकल पुरानो भएको छ ? आजै लैजानुस् एक्सचेञ्ज मेलामा
पछिल्लाे बैंकको सेयर छ ? पाउँदै हुनुहुन्छ १० प्रतिशत बोनस सेयर र ११.०५ प्रतिशत नगद लाभांश